Maldives Rich Cultural Heritage dia miantsoantso hoe InternationalYacht Rally Style
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maldives Rich Cultural Heritage dia miantsoantso hoe InternationalYacht Rally Style
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Maldives • fivoriana • People • fanorenana • Sao Tome sy Principe Breaking News • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • WTN
Tale mpitantana ny MITDC, Mohamed Raaidh
'Savaadheeththa Dhathuru' dia hetsika fandehanan-tsambo karakarain'ny Maldives Integrated Tourism Corporation (MITDC) manasa tantsambo avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao handray anjara amin'ny dia mamakivaky ny ranomasina Maldives, mijanona amin'ny nosy eo an-toerana, mijery ny lova, miaina tranonkala manitrika malaza, fasika sns sns. Manomboka ny volana febroary 2022 ny dia manomboka amin'ny atoll avaratry ny firenena indrindra, Haa Alif Atoll, maharitra 3 herinandro vao tonga any Baa Atoll. Natao hitsidika nosy 11 feno mponina.
Ny tanjon'ny mpikarakara International Yacht Rally dia ny hampiroborobo ny kolontsaina & lova Maldiviana, ny tantara manankarena ary koa ny fizahan-tany yacht ary hitrandrahana ireo tombontsoa azo avy amin'ny fanamafisana ireo faritra ireo ao amin'ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny firenena.
MITDC dia manasongadina ity hetsika ity ho fanomezam-boninahitra ny iray amin'ireo mpanjaka lehibe indrindra hitondra ny firenena kely nosy, As-Sultan al-Gaazee Muhammad Thakurufaanu al-Auzam (Bodu Thakurufaanu).
Ity dia fitsangatsanganana manokana amin'ny alàlan'ny tantaran'i Maldivian, manasongadina ireo fahatsiarovana natokana ho an'i Sultan Muhammed Thakurufaanu, ary fitsidihana ireo toerana manan-tantara mifandraika amin'ny asany.
Ny lanonam-panokafana ny Savaadheeththa Rallye Iraisam-pirenena any Dhathuru Ny 2022 dia notanterahina androany alatsinainy 23 aogositra 2021 tao amin'ny National Museum.
Ny kabary fanokafana nataon'ny Tale mpitantana, Mohamed Raaidh, dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fanatontosana ireo varotra Maldives momba ny fizahantany ary niresaka ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana ny fizahantany miorina amin'ny vondrom-piarahamonina any amin'ireo nosy eo an-toerana.
Notsongainy ihany koa ny kabarin'ny filoha Ibrahim Mohamed Solih tamin'ny faha-100 taonan'ny Muleeaage tamin'ny Desambra 2019, izay nitaky ny fampidirana ny fizahantany Heritage sy ny maha-zava-dehibe azy ireo any Maldives.
Ity pejy niavaka ity 2 of 2 ny kabary no aingam-panahy nitarika ny MITDC ekipa hikarakara ny famoriam-bahoaka tao Savaadheeththa Dhathuru yacht.
Ny Savaadheeththa Dhathuru Yacht Rally dia notokanana tamim-pomba ofisialy tamin'ny vahinin'ny voninahitra, Andriamatoa Salah Shihab, Tale mpitantana sady mpiara-manorina ny Voyages Maldives sy Seagull Group.
Nandritra ny lahateniny, Andriamatoa Salah dia nampifantoka ny sainy hiteny momba ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany safari amin'ny nosy toy ny Maldives ary nilaza fa ity no fomba tsara indrindra hijerena ireo Maldives tena izy.
Naneho ny fankasitrahany ihany koa izy tamin'ny fikarakarana rallye iraisam-pirenena ho an'ny yacht, satria mino izy fa izany fihetsiketsehana izany dia hanintona olona betsaka amin'ny lafiny ara-kolontsaina ao amin'ny Indostrian'ny fizahantany ao amin'ny firenena.
Ity hetsika ity dia nahitana kabary iray avy amin'ny Musheer an'ny minisiteran'ny vakoka, Nishaan Izzudheen ge Izzathuge Veriya Andriamatoa Abbas Ibrahim izay niresaka tamin'ny fandraisana momba ny maha-zava-dehibe ny fitehirizana ny lovam-pirenena, ary naneho ny fankasitrahany an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fikarakarana hetsika toy izany .
Ny hiran'ny lohahevitra ofisialin'ny fihetsiketsehana dia navoakan'ity talen'ny talen'ny talen'ny MMPRC ity, Andriamatoa Thoyyib Mohamed. Nandritra ny lahateniny dia nanome toky izy fa ny fiaraha-miasa matotra avy amin'ny MMPRC manoloana ity famoriam-bahoaka ity, izay manasongadina bebe kokoa ny maha-zava-dehibe ny fanombohana hetsika toy izany.
Nanatrika ny lanonana ny minisitry ny toekarena Oz. Fayyaz Ismail, minisitry ny fiarovana Oz. Mariya Didi, mpikambana ao amin'ny parlemanta, tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta, ary ny mpitondra tsirairay amin'ireo fikambanana ambony ao amin'ny firenena.
Miaraka amin'ny fandefasana amin'ny fomba ofisialy, ny fandraisana anjara amin'ny famoriam-bahoaka ao Savaadheeththa Dhathuru yacht dia misokatra ho an'ireo tantsambo manerana izao tontolo izao handray anjara amin'ny fihetsiketsehana yacht voalohany manerana ny nosy Maldives. Ny tranonkala ofisialin'ny rallye yacht dia www.maldivesyaktrally.com
Ny Maldives Integrated Tourism Development Corporation (MITDC) dia governemanta 100% Maldivian SOE notendrena hanohana sy hampiroborobo ny fivoarana sy ny fitomboan'ny ampaham-barotra eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny tanjona voalohany amin'izany dia ny hitondra fitomboana ara-toekarena ho an'ny firenena amin'ny alàlan'ny fanitarana ireo làlana mety hizoran'ny sehatry ny fizahantany amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny fizahan-tany miaraka amin'ity rafitra ity. MTDC dia mpikambana ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.